ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘဝကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ဖြတ်သန်းကြမလဲ ? | MyanLearn Article
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘဝကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ဖြတ်သန်းကြမလဲ ?
ဘဝဆိုတာ ပန်းခင်းလမ်းကြီးပဲ မဟုတ်ဘူး ။ တခါတလေ ဆူးခင်းလမ်းတွေကိုလည်း လျှောက်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ငယ်ငယ်က အမြဲလိုလို ကြားဖူးနေပေမယ့် တကယ်တမ်း အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်တော့ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ ဖြတ်ကျော်ရမယ့် ဒီလိုဆူးခမ်းလမ်းမကြီးကို မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ နောက်ပြန်လှည့်ရမလား၊ ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်နေရမလား ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သူကြီးပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လူကြီးလူငယ်မရွေး ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ အခုလို အခြေအနေ ကာလမျိုးတွေမှာပေါ။ အိပ်မက်တွေ ပျောက် လမ်းတွေပျောက်ရင်း စိတ်စွန်းအားဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရှာပြီး ရင်ဆိုင်ရမလဲ မသိကို ဖြစ်နေကြတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ဒီလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အချိန်တွေရောက်လာတိုင်း အဆိုဒဆုံးအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ဘဝကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းသွားကြရမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ကူညီ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်အနှစ်ချုပ် အမျိုးအစားအစုံအလင်နဲ့ အသံသွင်းစာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုနားဆင်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ MyanLearn App လေးကိုသာ အောက်က လင့်ခ်ထဲ ဝင်ပြီး download လုပ်ပြီး ဖတ်ရှု လေ့လာ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
Android - https://bit.ly/MLw_20210917
IOS - https://bit.ly/MLFB_i20210917
• ဒါက ပြီးသွားမှာပါ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မွေးပါ။
ဆိုပြီး မသိလိုက်ဘာသာ လက်လျှော့နေခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါ ကိုယ် သွားချင်တဲ့ ပန်းတိုင်အိပ်မက်တွေကို
ရောက်မှာပါ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အားမွေးရင်း ဖြတ်သန်းဖို့ပါ။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေချိန်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့မှ မဖြစ်တာ။
ဒါကြောင့် အမှောင်ဆုံးအချိန်တွေပြီးရင် ရောင်နီ လာမှာ ဆိုတဲ့
ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပြင်ဆင်ဖြတ်သန်းတတ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။
• အဆိုးဆုံးအချိန်မှာ သင်ယူပါ။
ဒီလောက် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ကြိုးစားဖြတ်သန်းနေချိန်ကို ဘာကို သင်ယူ ရမှာလဲ လို့
မေးခွန်းထုတ်မိရင် ဒီလို အခြေအနေကို ဘာကြောင့်ရောက်လာတဲ၊
ရောက်လာတဲ့အခါမှာရော ကိုယ်က ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေမိတာလဲ
ဆိုတာကို ပြန်လည် သုံးသပ် သင်ယူခိုင်းတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်
ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြောင့် ဖြင်္စသွားတာမျိုးဆို ဒီလို မျိုး
နောက်ထပ် မဖြစ်ရအောင် ဘယ်အချက်တွေကို ဂရုစိုက်ရမလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် လတ်တလော ရောဂါ အခြေအနေမျိုးတွေကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း
ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခွင့်မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာရော Plan B အနေနဲ့
ကိုယ်က ဘယ်လို ဖြတ်သန်းနေသလဲ အကျိုးရှိရှိ ဘာတွေ လုပ်မိနေလဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည် ဝေဖန် သုံးသပ်ပြီး သင်ယူလေ့လာ ကြည့်ပါ။
• သင်က ပျော့ညံ့တဲ့ လူမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ စကားက သင့်ကိုယ့်သင် အားတက်အောင် ဖန်တီး အားပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီ တိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ခွန်အားဆိုတာ ရှိထားပြီးသားပါ။ ဘာကြောင့်ဆို ရှင်သန်လာတဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ဒီလိုပဲ ကြံ့ကြံခိုင် နေထိုင်ဖြတ်သန်းလာကြသူတွေချည်းပါပဲ၊ သာမန် လူ ကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးတွေမှာ ဘယ်သူကမှတော့ ရာနှုန်းပြည့် အမြဲ ပျော်ရွှင်မနေရပါဘူး
ဒါကြောင့်လည်း တခါတလေ ပြဿနာ ကြီးကြီးသေးသေး ဘယ်လို အခြေအနေမှာဆို စိတ်ညစ် စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တိုင်း ပြန် ရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ဒီ တွန်းအားလေးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အရင်က အချိန်တွေကို ကိုယ်ဘယ်လို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့လဲ ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တခြားလူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေမယ့် အစား ဒီလို အျေိန်ဟာ ဒီလို စိတ်ဓာတ်မွေးပြီး ဖြတ်ကျော်ဖို့ ရောက်လာတာမျိုးလို့ လက်ခံပြီး ရင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါ။
အခက်အခဲတွေကြားမှာ ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းနေရကြတာလဲ လို့ လူတွေကို မေးရင် သူတို့မှာ ကိုယ်စီ အိပ်မက် ပန်းတိုင်တွေ ရှိနေကြလို့ပါ။ ဒါပြီးရင် ခရီးတွေ ထွက်ချင်တာ ၊ ဒီလို အခြေအနေကနေ အဆင်ပြေသွားရင် သင်တန်းတွေတက်ချင်တာ စသည်ဖြင့်ပေါ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကစလို့ အကြီးမားဆုံးသော ဘ၀ ပန်းတိုင်ရည်၇ရါယချက်တွေထိပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက် တွန်အားတစ်ခု၊ ခွန်အားတစ်ခု အဖြစ် ရှိနေရင်း အားတင်းရင်ဆိုင်နေကြပါ။ ကြားဖူးနေကြ စကားတစ်ခုလိုပေါ့။ ဘဝဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်တွေနဲ့ အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာ။ ဒါကြောင့်လည်း သင့်ဘဝကို ရှေ့ဆက်ဖို့ အမြဲ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်တွေ ရှိနေပါစေ။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေမှာ အကောင်းမြင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှတဲ့ အရာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ခွန်အားရှိဖို့ အဆိုးတွေပဲ ရွေးပြီး တွေးနေ မြင်နေလို့ မရဘူး မဟူတ်လား။ဥပမာ ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝှမ်း ကပ်ရောဂါနဲ့ သေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်နေချိန်မှာ ကိုယ်က ခုထိ အသက်၀၀ ရှုနိုင်တာ၊ နေကောင်းနေသေးတာ တွေက ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းမှုတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်အဆိုးတွေထဲမှာလည်း ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကွက်လေးတွေကို ရွေးမြင်ပြီး တန်ဖိုးထား ရှေ့ဆက်တတ်ပါစေ။
စိတ်ညစ်အားလျော့ချိန်တိုင်း ကိုယ့်အတွက် အဖော်မွန်ကောင်းဆိုတာ စာအုပ်စာပေပါပဲ။ ကိုယ်ဖတ်တဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရတယ်။ပျော်ရွှင်ရတယ်။ ဘဝအမောပြေတယ်။ နောက်ပြီး လက်တွေ့နဲ့ဆက်စပ်ပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး ဖတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖေ့ဘုတ် ကြည့်ရင်း ဆောင်းပါးလေးတွေ ဖတ်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေ ဖတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်ဖို့ စိတ်ခွန်အား ရယူဖို့ ကြိုးစားဖတ်သင့်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ ဆိုတာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ရေးရမယ့် စာမျက်နှာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်မျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားနေနိုင်ချိန်မှာ ကြိုးစားပါ။ ရှင်သန်ပါ။ ကိုယ် မထိန်းချုပ်နိုင် မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေကာလတွေ အတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ရောက်လာခဲ့ရင် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပါ။
အဆိုးဆုံးအခြေအနေဆိုတိုင်းက သင့်ကို သန်မာအောင် ပိုရင့်ကျက်အောင် ပြုပြင်ပေးနိုင်တာမို့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ အကောင်းဆုံး ရှင်သန်ကြည့်ပစ်လိုက်စမ်းပါ။
“ MyanLearn ” နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက
MyanLearn App ရဲ့ hotline နံပါတ် 09 777971606
FB Page Messenger (m.me/myanlearn) မှာလည်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။